Wararkii ugu danbeeyey ee tartanka xisbiyada Somaliland oo galbeed ka shidan iyo Musharrax Muse Biixi oo hadhimo ku leh Dilla | Awdalpress.com
Waxa Daabacay staff-reporter on Oct 7th, 2017 and filed under Daily Somali News, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Laba usbuuc ayaa ka soo wareegtay markii Musharrax Cirro iyo wafdi uu hoggaaminayaa ay booqdeen Dilla iyo Borama, waxana socdaalkoodaa ku naf-waayey wiil yar oo ay ciidanka ammaanku rasaas huwiyeen. Dhacdadaasina waxa ay maamulka degmadu dusha u saareen xisbiga Waddani, halka ay xisbiga Waddanina ay eeddaa korka ka saareen taageerayaasha Kulmiye iyo Madaxda dawladd qaar ka tirsan.
Awdalpress – London – Maantana waxa magaalada Dilla looga diyaar garoobayaa soo dhaweynta wafdiga KULMIYE ee ay hoggaaminayaan Musharraxa Madaxweynaha Kulmiye Muse Bixi iyo musharrax xigeenkiisa Zaylici. Soo dhaweyntan oo uu hor boodayo amma uu wado wasiirka Shaqada Somaliland mudane Mohamed A Xaaji Obsiye oo u dhashay degaanka bariga Borama, ayaa si nasasha la’aan ah ugu hawlan soo dhaweynta Wafdiga ee gobolka Awdal iyo hadhimada maanta loogu samaynayo Degmada Dilla. Waxanu saacado isaga kala gudbayaa Dilla, Ruqi, Jaarraahoroto iyo Guban. Haka dhiggiisa Waddani ay ku hoos nasayaan Hotel Rays iyo Saw Hotel.
Xaraarada shacabka kala taageeraya labada xisbi ayaa cirkaa maraysa. waxana la sheegayaa in dhallin yar iyo odayaalba la wada xaydan yahay. Laakin odayada u badan cuqaasha oo la jaha wareeriyey, ayaa iyagu jecel in ay labada dhinacba la wada hadlaan, una kuur galaan waxa xisbi walba la shir imanayo amma waxqabadkiisu yahay. Sidoo kale waxa ay waaya aragnimadu faraysaa, ixtiraamka martida iyo wada dhalashada amma ood wadaagta.
Xaalka kala doorashada labada xisbiga waa mid aad u adag, oo kolba ka la doorto mooyee, ka kale uu degaanka saamayn weyn ku yeelan karo. Sidaasi awgeed loo baahan yahay in aad looga fekero.
Tusaale ahaan dadka degaanku waxa ay maanta kala dooranayaan, siyaasi u ordaya Madaxweyne ku xigeen oo ka dhashay iyo Siyaasi ay ood wadaag yihiin wakhti adagina uu soo kala dhex maray. Shacabkuna ay waaya arag u yihiin colaad iyo nabad midka roon. Xilliganna lama saadaalin karo midka labadan xisbigi guulaysan doona. Sidaasi daraaddeed, haddii ay wiilkooda ugu shubaan codka, balse uu xisbigiisu guulaysan waayo, waxa halkaa ka imanaysa bay leeyihiin colaad hor leh oo ka dhex curata beelaha ood wadaagta ah. Haddii ay siyaasiga Muse Biixi u codeeyaanna, waxa dhimanaysa tolnimadii iyo wada dhalashadii la isugu hiillan jiray. Sheekadu markaa waa laba daran mid dooro.
Siyaasiga wasiirka u ah degaanka…waa Obsiyee, waxa uu mar walba xaradhaaminayaa arrimo xasaasi ah, aadna u daran, oo uu doonayo in uu dadkiisa ku soo jiito. Waana nin aanu dagaalkiisa xisbinimo sokayn oo aan yaraysanayn. Xataa haddii uu tolkii oo wada jira ku guulaysan waayo, waxa uu isku dayi doonaa in uu badh la goosto, oo ay tolkii u kala hiilliyaan Musharraxa degaanka iyo Musharraxa ka soo jeeda Hargeysa.
Dhinaca siyaasiyiinta Waddani ee ka soo jeedda degaanka oo u badan qurba joog ayaa iyagu ah kuwo dadka iyo degaankaba ka maqnaa muddo dheer, isla markaana ka badaw ah xeeladaha ay dadku maanta ku wada nool yihiin. Dhaqaala ahaanna siyaasiyiintani maaha kuwo sita xoolo ay hawlahan ku maareeyaan, bedelkeedana waa rag sita boodh uu ku qoran yahay XISBIGA WAX KU SOO DARSO. Halka xisbiga ay is hayaan laga filayo dhaqaale. Inkasta oo aan isaga laftiisa waxba laga hayn.
Siyaasiyiinta Waddani ee uu Musharax Mohamed Ali wataa, maaha kowo weli ay u dejisan tahay sidii ay u hawl geli lahaayeen, xataa ma yaqaannaan goobaha ay ka hawlgalayaan iyo dadka mucaawimada uga baahan, haddii ay noqon lahay soo daabulista, wacyi gelinta iyo guddiyo u samaynta goobaha cod bixinta. Arrimaha noocaasi ah in ay ku tallaabsadaanna waxa ka hor jooga dhaqaale xumo iyo faham siyaasadeed amma dhiirranaan aanay lahayn. Waxase sida la sheegay ay aamminsan yihiin in ay shacabku ku khasban yihiin in ay u codeeyaan musharraxooda ka dhashay.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, waxa xilligan dhinaca galbeedka Somaliland oo ay ka shidan tahay dar dar cusub la soo baxay xisbiga Kulmiye. Dadkuna waxa ay u arkaan in uu xisbigaasi Kulmiye ku guulaysan doono doorashada maaddaama uu garabka dawladda ka soo jeedo, wada shaqayn hoose iyo mid sarena uu la leeyahay amniga, xukuumadda. Sidoo kalena ay dawladdu la garab joogto dhaqaale iyo taakulayn kaleba.
Xisbiga Waddani oo shacbiyaddiisu badan tahayna, waxa uu u sinqayaa dhinac itaal daran, oo uu u baahan yahay kaadar fahmad u leh abaabulka iyo kicinta bulshada ama dhiig cusub oo deg deg ah, si uu u hanto guushiisa bannaanka taalla. Laakiin sida muuqata, waxa hawl wadeennadiisii u bateen, dad aan ku dhac lahayn, dadkoodii in ay dhex tagaan ka baqaya, xishood badan amma ka gaabinaya in ay ku dhiirradaan sidii hawshan loo maarayn lahaa.
Shacabkana waxa lagu soo jiidan karaa in loo tago, lala sheekaysto, shaaha lala soo cabbo meel kasta oo ay joogaan lagu booqdo. Balse haddii laga maago, oo laga anafoodo amma la yidhaa dhulkaasi kaneeco ayuu leeyahay oo ma tegi karro, waxa u orod badin doona ragga xoogga u ordaya ee aan immiga wax buuran hayn. Sida Wasiir Obsiye oo kale.
This post has been viewed 17536 times.